WOWOW Impompi Yekhishi Yekhishi Ye-Chrome Enesifutho Sokukhipha - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / WOWOW I-Chrome Kitchen Sink Faucet Ekhipha Isifutho
I-WowOW Chrome Kitchen Sink Faucet ene-Sprayer yokukhipha
Thenga i-Kitchen Faucet single Handle inomsebenzi wokudonsela othomathikhi. Umsebenzi wokudonswa emuva kwesikhiphi sokudonsa utholakala ikakhulukazi ngebhola lokudonsa (eyaziwa nangokuthi njengebhulokhi yamandla adonsela phansi kanye nesando sokudonsa).
2310800C imiyalo yokufaka
Donsela phansi ompompi bokuxuba ikhishi
Ufuna i-classical chrome edilize phansi ikhishini lokuxuba ikhishini? Ungabe usacinga! I-WOWOW ikunikeza enye yamompompu wokuxubha wasekhishini futhi wesimanje kodwa ongawathola emakethe. Inani layo lemali alithinteki, njengoba i-WOWOW iyazi ukwenza amakhompiyutha ekhwalithi ephezulu ekhishini ngentengo ebiza kakhulu. Ngaphandle kwalokho, ukwakheka kwayo okungafaniyo kwenza ukuthi i-WOWOW idonsele phansi ikhomishini yokuxuba ikhonkotha ukubamba iso kunoma iyiphi ikhishi. Uma ukhetha umklamo wasekhishini wasendulo, noma idizayina ekhishini yesimanje, le thepha yokudonsa ekhishini elihlanganayo izongena kuyo.
Ngaso sonke isikhathi lapho abaklami be-WOWOW bekwazi ukuklama badonsa phansi ompompi bezinto zasekhishini abamangaza abantu abaningi. I-WOWOW ifuna ukuklama kuphela ompompi be-ekhishini abaxuba iso abawenza umehluko kunoma iyiphi ikhishi. Abanye abantu bawukela phansi umthelela ompompi abaxube ekhishini, ngoba benza umehluko omkhulu kunoma iyiphi ikhishi. Amakhompu wokuxuba ekhishini angangeza ukuthinta okhethekile kunoma iyiphi ikhishi. Abaqambi eWOWOW bayazi kakhulu lokhu. Akusizi ngalutho ukuthi amaphampu we-mixer ekhishini we-WOWOW athengiswa kumakhasimende avela emhlabeni wonke.
Izimpompo ezisebenzayo zehlise amakhomputha ekhishini
Amompompi we-mixer ekhishini we-donsa phansi we-WOWOW afaka inzuzo yokuthi i-hose yamanzi ingakhishwa kalula empompini womxube wekhishini. Lokhu ngokuvamile kwandisa indawo yakho eshayelayo ngesinye isentimitha ayi-15 kuye kwangama-23. Umbhobho wamanzi wokuphinda ubuye ungakhipha kalula, ukwandisa indawo yakho yokuwasha ngokumangazayo. Njalo ekhoneni kwekhishi lakho kuyacwila, obekulukhuni ngaphambili ukufika ngethegi yakho yokuxhuma ekhishini, manje ingahlanzwa kalula. I-hose yamanzi ingakhipha kalula futhi ngemuva kokusetshenziswa kwayo, izobuyela ngokuzenzakalelayo esimweni sayo sokuqala.
Enye into enhle yamompompi we-ekhishini we-mixer we-donsa phansi we-WOWOW yipompo ye-swivel engahambisa ama-degree angama-360. Lokho kwenza ukuthi la manompompi webhokisi lokuxuba ekhishini alungele ngokukhethekile izinkinki ezimbili zekhishini. Ngale ndlela kulula ukuthi uguqulwe usuka ekhishini ushone uye kwelinye. Kuzwakala kubushelelezi ukusebenzisa la makompompi we-mixer ekhishini njengoba iWOWOW isebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme kumompompi wayo wokuxubha ekhishini. Uqaphela umehluko ngokushesha lapho usebenza empompini wokuxubha wasekhishini weWOWOW.
Amamodi we-3-mode adonsa phansi ompompi be-mixer ekhishini
Amompompi wokudonsela phansi wasekhishini we-WOWOW angaqhutshwa yikhanda elilodwa eliphakeme kakhulu. Amanzi afudumele nalawo abandayo angahlanganiswa ngesandla esisodwa kuze kufike lapho izinga lokushisa elifanele lifinyelela. Futhi lokho kusebenza ngevolumu yamanzi futhi. Ngale ndlela uzohlala ugcina isandla esisodwa sikhululekile ukwenza eminye imisebenzi yasekhishini. I-cartridge ye-ceramic ye-drip-free iqinisekisa ukusebenza kahle. Ngenxa yokubekwa uphawu kwayo, i-lever ijikeleza kahle futhi iqinisekise ukusetshenziswa kwesikhathi eside ngaphandle kokudonsa kwamanzi noma ukuvuza. Futhi ngaphezu kwakho konke, futhi iqinisekisa ukulawulwa okuqondile nokungaguquki kwezinga lokushisa lamanzi ngaphandle kwanoma yikuphi emuva.
Ukudonsa phansi amakhomputha ekhishini wokuxuba anikeza empompini womshini wokuxubha wasekhishini wemisebenzi emithathu. Ngaphandle kwemodi ejwayelekile yokusakazwa kwamanzi, ungakhetha futhi imodi yokufafaza noma imodi ye-aqua-blade mode. Le modi ye-aqua-blade ikunikeza ngejet lamanzi elinamandla kakhulu, elingakhipha kalula yonke imfucumfucu yokudla kusuka kumapuleti noma ekhishini lizike ngokwalo. Lo msebenzi uhlukile emakethe futhi nakanjani inzuzo yokudonsa phansi ompompi we-mixer ekhishini we-WOWOW ngaphezulu kokudonsa phansi ompompi ekhishini wokuxuba. Ungamane ushintshe imisebenzi yamanzi lapho uthinta inkinobho, ebekwe kalula ekhanda lokufafaza empompini wokuxubha wasekhishini.
Amompompi wekhwalithi ephezulu esezingeni eliphansi
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-WOWOW ikwazi kahle ukubaluleka kwekhwalithi yokudonsa phansi ompompi wokuxuba ikhishi. Kungakho i-WOWOW isebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ezedlula wonke amazinga womkhakha. Cabanga ngezinqubo ze-premium surface electroplating, ukufakwa komhlaba okudumile njenge-Neoperl aerator, nezinto zensimbi eziqinile. Ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa umkhiqizo owenza kahle kakhulu wokusebenzisa isikhathi eside. Ngakho-ke i-WOWOW futhi ingakunika iwaranti yomkhiqizo weminyaka engu-3 kumompompi wayo wokuxubha wasekhishini. Futhi ngaphezu kwakho konke, e-WOWOW sinesiqiniseko sokuthi uzoqhubeka nokubuyela kithi, njengoba iningi lamakhasimende ethu lihlala lingamakhasimende athembekile empilweni ngenxa yenani eliphansi lemali esiyinikezayo.
Ikhanda lokugeza elisuswayo lamompompi wekhishini lokuxhuma eliphakeme lidonsa kalula kulula ukukhipha noma ukulishintsha. Ngale ndlela ungahlanza futhi ugcine inhloko yokufafaza yalesi sixhobo sokuxuba ngokulula, futhi ususe yonke insali yamanzi anzima ayisikhathi sokuqoqa. Ukudonsa phansi kwamompompi wasekhishini we-mixer kufanelekile kakhulu ezinhlelweni eziphakeme zokucindezela. I-hoses yezimo zamanzi e-silica eguqukayo ngakho-ke futhi inikezela ukusebenza okubushelelezi nokuqina isikhathi eside sempilo.
Ifaka phansi ompompi abaxube ekhishini
Amompompi wokudonsela phansi wasekhishini we-WOWOW angafakwa emphemeni wasekhishini ongu-1 noma u-3. Amapompo we-ekhompiyutha afakwe phansi adonswa phansi komshini wokuxuba ikhishini kuhanjiswa nekhithi yokufaka ephelele. Ngopuleti wensimbi obekwe emphemeni wensimbi zonke izimbobo zimboziwe, ngakho-ke uzothola isiqiniseko sokuthi kuzofakwa ipayipi elingumakhi ekhishini elifakwe ngaphakathi. Ukuze ukwazi ukufaka lezi zidonsa phansi umxube wekhishi ngokwakho, yonke i-Hardware ifakiwe kwiphakheji. Ungaqeda ukufaka phansi ompompi ekhishini wokuxuba okhipha umoya onjengomoya oshaya umoya. Ngevidiyo yomhlangano ungaqeda kalula ukufakwa ngaphansi kwemizuzu engama-30. Lokhu kuzokusindisa ukhuni obizayo!
Ngaphandle kwenkathi yesiqinisekiso seminyaka emithathu yeminyaka emithathu ekuhlinzekwa yi-WOWOW lapho uthenga la makompompi we-mixer ekhishini, iWOWOW futhi ikunikeza isiqinisekiso sezinsuku ezingama-3 sokubuyiselwa imali. Uma ungeke uhlabeke umxhwele ngenani lemali oyithola ngokuthenga lawa ompompi we-mixer ekhishini, ungabuyisela impompi yokudonsa ekhishini ngaphandle kokuhlupheka. Uzothola imbuyiselo ephelele ngaphandle kwemibuzo ebuziwe.
Izinzuzo zokwehlisa phansi ompompi wokuxubha wasekhishini ngamafuphi:
Nikeza i-wow-factor kunoma yiliphi ikhishi
Idizayini yakudala nokho yesimanje
Izindlela ezintathu zamanzi, kufaka phakathi umfutho ophakeme we-aqua-blade
Kubandakanya ukufaka ikhithi ozenzela yona
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90
I-SKU: 2310800C Categories: Ikhishi Faucets, Donsela Phansi Oompompi Bekhishi Tags: 1 Imbobo, Chrome, Donsela Phansi